Accueil > Gazetin'ny nosy > Madagasikara: Paradisa ho an’ny vahiny manao heloka bevava
Madagasikara: Paradisa ho an’ny vahiny manao heloka bevava
Eto amintsika, matetika re rehefa miresaka na miady hevitra mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny teny hoe “gaboraraka sy baranahany”. Saika ahitàna izany daholo ny sehatra rehetra eto amin’ity Madagasikara ity, na eo amin’ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-panjakana, ny fanajana ny tany tan-dalàna, na koa ny fifehezana ny fidirana sy ny fivoahan’ireo teratany vahiny eto amintsika. Tato anatin’ny taona vitsy izay dia hita nibaribary ihany koa ny fisian’ireo teratany vahiny nanao heloka bevava ary voasazin’ny fitsarana kanefa tafatsoaka any ampitan-dranomasina. Tsara anefa ny manamarika fa tsy sarotra ho an’ireto vahiny manao heloka bevava ireto izay fandosirana any ivelany izay fa mora toy ny kilalaon-jaza. Ny antony dia satria voavidy vola daholo na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana, na koa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny miasa eny anivon’ny seranam-piaramanidina sy seranam-tsambo. Maro tsy ho voatanisa moa izy ireo fa ohatra roa fotsiny no raisina, dia ilay teratany karana antsoina hoe Mouziz sy ilay teratany frantsay maghrebianina, Houcin Arfa. Raha ny momba ity hoe Mouziz ity dia efa voaheloky ny fitsarana tao Toamasina ny tenany, volana maromaro lasa izay, noho ny heloka bevava nataony kanefa tao anatin’ny fohy monja ary tamin’ny fomba tsotra indrindra dia tafatsoaka tatsy amin’ny Nosy rahavavy La Réunion. Mandrak’ity moa ny androany dia tsy misy resaka intsony ny momba azy. Angamba tsy ilaina ampahatsiahivina intsony ny momban’i Houcine Arfa izay nandositra any Frantsa rehefa votsotra teo am-pelatanan’ireo mpiandry fonja malagasy, ny faraparan’ny volana desambra tamin’ny taon-dasa teo. Izany rehetra izany no manaporofo fa firenena anjakan’ny gaboraraka sy ny kolikoly ity Madagasikara ity ka lasa paradisa ho an’ireo teratany vahiny mpanao heloka bevava.
: Fahotàna mahafaty no nataon’ny ARMP
Tao anatin’ny 72 ora dia niteraka resabe teo amin’ireo mpanara-baovao ny fiparitahan’ny ampahany tamin’ireo antotan-taratasy mirakitra ny tatitra ny ARMP na ny « Autorité de Régulation des Marchés Publics » ho an’ny taona 2016, ao anatin’ny tambazotran-tserasera. « Scandale financière » moa no filaza azy amin’ny fiteny frantsay satria dia vaky ambatolampy ny vola be tsy toko tsy forohina izay lanian’ireo tompon’andraiki-panjakana amin’ny tsenam-panjakana (marchés publics) eny anivon’ireny ministera samihafa ireny. Hita tao anatin’ireo tatitra ny ARMP miparitaka ao anatin’ny tambazotran-tserasera ireo ohatra ny fandanian’ny ministera iray vola hatrany amin’ny 50 tapitrisa ariary amina sakafo ho an’ireo mpanao fanatanjahan-tena eo anivon’ny ministera rehefa mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisan’ny departemanta ministerialy rehetra. Eo ihany koa ny fandaniana vola hatrany amin’ny 2 miliara ariary amin’ny fikojakojana fiara Wolswagen Polo iray, ampiasain’ny tompon’andraikitra ambony iray eo anivon’ny ministera. Rehefa nandeha moa ny resabe sy ny fanakianana avy amin’ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety dia nampiantso mpanao gazety ny tale jeneralin’ny ARMP, nitondra fanazavana ny tena zava-misy marina momba izay tatitra navoakan’izy ireo izay. « Manoloana ireny tatitra nivoaka tao anatin’ny tranonkalan’ny ARMP ireny ary miparitaka anaty tambazotran-tserasera, dia tianay ny mampahafantatra ny vahoaka malagasy rehetra fa nisy ny fahadisoana teo amin’ny fanoratana ny tetibola nolaniana teo anivon’ireo ministera sasany. Ny tena marina dia nitombo 0 telo ny isa voasoratra ka izay no antony nampidangana ny vola lany tao anatin’ny tatitra nivoaka”, hoy ny tale jeneralin’ny ARMP, Tovoherimanana Philbert. Nambarany fa teo anivon’ny SIGMP (Système Informatisé de Gestion Publique) no niaingan’ny fahadisoana. Raha tena izay fanazavana nentin’ny tale jeneraly ny ARMP izay tokoa no tena zava-nitranga marina dia zava-doza ary fahotana mahafaty no nataon’izy ireo. Tsara marihana fa eo amin’ny resaka fitantanam-bolam-panjakana na ny “finances publiques” dia tena faran’izay fahotana mahafaty ny manao fahadisoana amin’ny resaka isa, indrindra fa ny 0 mihoatra. Na 0 iray fotsiny aza no mihoatra ao anatin’ireny tetibola voasoratra ao anatin’ny tatitra ireny dia efa zava-doza sy fahotana mahafaty ao anatin’ny fitantanam-bolam-panjakana, vao mainka fa 0 telo be izao. Tena faran’izay saropady mantsy ny fitantanana izany volam-panjakana izany satria volam-bahoaka.